Deeq-bixiyeyaasha ayaa garab istaagaya hiigsiga uu maamulkan kaga gudbayo hanaanka awood qeybsiga beelaha.
GAROWE, Puntland – Beesha Caalamka ayaa ku garab-istaageysa dowlada Puntland sidii ay u hirgelin lahayd hanaanka dimuqraadiyadda, sidda lagu sheegay qoraal kasoo baxay Guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah ee TPEC.
War-saxaafadeedka ayaa daba-socday kulan caasimada Kenya ee Nairobi ku dhexmaray gudoomiyaha guddiga iyo wakiilada Beesha Caalamka.
Wakiiladda ayaa ka kala socday Midowga Yurub, Sweden, Switzerland, Denmark iyo sanduuqa xasilinta Soomaaliya [Somali Stability Fund].
Sidda laga soo xigtay warka qoraalka ah, is-aragga waxaa la isaga xog-wareystay dedaaladda socda iyo wax-qabadka guddiga sameeyay illaa haatan.
"Guddoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland Mudane Guuleed Saalax ayaa maanta kulan kula yeeshay magaalada Nairobi xubno ka socda beesha caalamka oo ay ka mid yihiin safaaradaga Midowga Yurub, Sweden, Switzerland, Denmark iyo sanduuqa xasilinta Soomaaliya (Somali Stability Fund)," ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay guddiga.
Bayaanka ayaa la raaciyey: "Waxay labada dhinac iska waraysteen dadaalada socda ee Puntland ay ugu guurayso hannaanka xisbiyada badan iyo qabsoomidda doorasho qof iyo cod oo qabsoonta sannadka soo socda ee 2021".
"Beesha Caalamku waxay bogaadiyeen dadaaladda socda iyo hormarka la gaaray oo ay ugu horrayso jiritaanka Ururo Siyaasadeed oo tiri iyo tayo ba leh kuwaas oo tartanka gelidoona sannadka dambe," ayay hoosta ka xariiqeen.
Qoraalkan lagu daabacay barta Facebook ee guddiga ayaa lagu soo gabagabeeyay: "Waxay sidoo kale ballanqaadeen inay wax walba oo suuragal ah la garab istaagidoonaan Puntland sidii ay u hirgalin lahayd hannaankaan".
Puntland ayaa isku diyaarineysa in ay ka gudubto hanaanka awood qeybsiga beelaha oo ay kusoo dhaqmeysay tan iyo aas-aaskeeda, waxaana lagu waddaa in doorashooyinka soo aadan ay codadkooda ka dhiibtaan dadweynaha.
DF oo "qorsheyneysa canshuur kordhin ka dhan ah" Khaadka Kenya
Afrika 03.08.2020. 09:45
Kenya Airways oo duulimaad toos ah ka bilawday Muqdisho
Afrika 18.12.2018. 18:32